राप्रपाका असन्तुष्टको भेला रोक्न कमल थापाको दबाब | Seto Khabar
राप्रपाका असन्तुष्टको भेला रोक्न कमल थापाको दबाब
काठमाडौं, ३० फागुन । एकता महाधिवेशन भएको एक महिना नबित्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटेको छ । महाधिवेशनअघि पार्टीका शीर्षनेता पशुपतिशमशेर राणालाई संसदीय बोर्डको अध्यक्ष, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई निर्देशक समितिको अध्यक्ष बनाउने र हलो चुनाव चिह्न नै कायम हुने सहमति कमल थापाले पालना नगरेपछि पूर्वराप्रपा नेताहरु पुनः अर्को पार्टी बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । २०७३ फागुन २९ गते डा. लोहनीले राप्रपा परित्यागको घोषणा गरिसकेका छन् ।
पार्टीमा कमल थापाको हैकम बढेको र पूर्वसहमति कुनै पालना नभएपछि २०७३ चैत ६ गते बालुवाटारको अम्रपाली बैंकटमा राप्रपा सुदृढीकरण अभियानको भेला बोलाइएको छ । भेला रोक्न राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नै अग्रसर भएका छन् । हलो चुनाव चिह्न लिएर छुट्टै पार्टी स्थापना गर्ने सूचना पाएपछि कमल थापाले राप्रपाका नेताहरुमार्फत् भेला रोक्न अनुनय विनय गर्न थालेका छन् । आजैमात्र पनि थापाले असन्तुष्टहरुको संयोजक भएका महेश्वर रोकालाई भेला रोक्न अनुरोध गरेका छन् । १२ सिट भएको पार्टी लगेर कमल थापाको पाउमा सुम्पिएका राप्रपाका शीर्षनेता चन्द, राणा र लोहनी एकपछि अर्को गरी धोका पाएपछि पश्चातापको भूमरीमा परेका छन् । निर्देशक समितिको अध्यक्ष शक्तिशाली हुने र त्यसकै निर्देशनमा सरकारमा मन्त्री पठाउने जस्ता ललीपप देखाएर कमल थापाले लोहनीलाई भुलाए तर केही पनि सहमति पालना गरेनन् ।
कमल थापाले महाधिवेशनअघि भएका कुनै पनि सहमति पालना नगरेको भन्दै पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टी छ । हलो चुनाव चिह्नको साटो गाई नै कायम गर्ने निर्णयपछि राप्रपाका शीर्षनेता डा. लोहनीले पार्टी त्यागेका छन् ।। पूर्वराप्रपामात्र होइन, राप्रपा नेपालका असन्तुष्टहरु पनि भेलामा सहभागी भइरहेका छन् । राप्रपा नेपालका तारा लुईटेल, श्याम तिमिल्सिना लगायतका धेरै नेताहरु समेत भेलामा सहभागी हुने रोक्काले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका बुद्धिमान तामाङलाई उपाध्यक्ष त्यो पनि मर्यादाक्रममा तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । कमल थापाले गरेको यो ब्यवहारबाट उनी असन्तुष्ट छन् । कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीसहित संघीय मामिला मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने दिन २०७३ फागुन २६ गते दीपक बोहरा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जाने तयारीमा थिए ।
उनलाई कमल थापाले बचन दिए पनि दिलनाथ गिरीलाई नै पर्यटन मन्त्री बनाएपछि बोहरा रुष्ट भएर पशुपतिशमशेर राणाको शरणमा पुगेका थिए । तर पशुपति राणाले उनलाई धोकेबाज भन्दै भेट समेत दिन इन्कार गरेको समाचार छ । बोहराले राज्यमन्त्री बनाउन भनेर इस्तियाक मुसलमानसँग ५० पेटी बुझेका थिए तर कमल थापाले पर्यटनमा धादिङका परशुराम तामाङलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि उनी थप मर्माहत भएका छन् । र, लिएको दाम पनि फिर्ता गर्नुपरेको छ । कमल थापाले बोहरा जस्तो बदनामलाई पर्यटन मन्त्रालय होइन, केही दिनपछि आपूर्तिबाटै फाल्नुपर्ने कुरा निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेको स्रोतले बताएको छ ।